थाइराइड र डाइबिटिलाई जरै देखि निर्मुल पार्न खानुहोस् यो फल – Sandesh Press
July 6, 2021 550
काठमाडौँ । कुनै पनि फलको सेवन गर्नु मानिसको शरीरको लागी फाइदाजनक हुन्छ । हरेक फलको आफ्नो आफ्नो फाइदा हुने गर्दछन् ।
किवी,अम्बा,नेसबरी,स्याउ आदि यस्ता फल छन् जसलाई खानको लागी सल्लाह दिने गरिन्छ । तर आज हामी जुन फलको बारेमा कुरा गर्न जाँदछौँ ती फलहरु खानमा स्वादिष्ट हुनुको साथसाथै स्वास्थ्यको लागी पनि एकदमै फाइदाजनक हुने गर्दछन् । अम्बा (बेलाउती)लाई अङ्ग्रजीमा guava भन्ने गरिन्छ ।
मधुमेह र थाइरोइड रोग त्यस्तो हो जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागी स्वस्थ जीवनशैली अनुसार जिउँनको लागी सल्लाह दिइन्छ। बेलाउतीको सेवन गरेर, व्यक्ति धेरै समस्याहरु बाट छुटकारा पाउन सक्छन्। आजको पोष्टमा, हामी बेलाउती खानुका के के फाइदा छन् भनेर कुरा गर्नेछौं।
यस्ता छन् बेलाउती खानुका फाइदाहरु
बेलाउती एक उच्च ऊर्जा खाना हो जसमा धेरै लाभदायक भिटामिन र खनिजहरू पाइन्छन् जुन हाम्रो मुटु, छाला, कपाल, दिमाग र हड्डीहरूका लागि लाभदायक हुन्छन्।
बेलाउतीमा भिटामीन B9 पाइने गर्दछ । जसले शरीरको केशिकाहरु र DNA एलाई सुधार गर्नमा सहयोग गर्दछ।
बेलाउतीमा भिटामिन ए र ई पाइन्छ जसले आँखा, कपाल र छालालाई पोषण दिने काम गर्दछ।
यसमा फाइबरको उच्च मात्रा हुन्छ जुन मधुमेह बिरामीहरूका लागि लाभदायक हुन्छ।
बेलाउँतीमा ओमेगा ३ फ्याटका एसिडहरू हुन्छन् जुन हाम्रो मुटुको लागि लाभदायक हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा रगतको संचारलाई सुधार गर्दछ।
बेलाउतीले थाइराइडलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ। सामान्य थाइराइडमा, डाक्टरहरूले प्रायः बेलाउती खाने सल्लाह दिन्छन्।
Prevआज देखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
Nextसाउन एक गतेदेखि यस्ता मोबाइल नचल्ने
पहिरोले बिहेको साइतनै टरेपछि..
पाथीभरा दर्शन गर्न आएका दुई हजारभन्दा बढी तिर्थयात्रीलाइ पर्यो यस्तो समस्या
आफ्नै भाईको हत्या गर्ने किशोरीले दिईन यस्तो बयान?
मृ”त्युअघि भुपेन्द्र बडुवालले आफ्नी जन्म दिने आमासंग बनाएका टिकटक भिडियो ( भिडियो सहित )